Windows Phone Vs Android vs macruufka, oo mobile OS waa kan ugu fiican.
Su'aasha ugu aasaasiga ah in boog fikirka user casriga ah marka la gaaro waqtiga la dallacsiiyo yahay, taas oo nidaamka qalliinka mobile (OS) waa ninka ugu fiican? Waxaa laga yaabaa inaad u isticmaalay mid ka badan kuwa kale ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay - waxaa laga yaabaa, waa wakhti inuu ka soo baxo aagaaga raaxada. Maqaalkani waxa uu is barbar doonaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka dhexeeya saddex waaweyn ee OS mobile ie Android, macruufka iyo Windows.
• Eeg Guud
Haddii aad tahay qof ka mid ah casriga ah tan iyo bilowgii, aad dareentay in ay Phones Android oo Window soo maray dhowr casriyaynta design in ay interface. In 2014, Android helay ay khaatiyaanka ka ugu weyn ee la olole caalami ah oo hurdiga ah 5.0 hagaajiyey tiro ka mid ah animations iyo siiyey OS ah fiirin sleeker badan. Android dadka isticmaala telefoonka ka heli doontaa shaashad qufulka oo muujinaya farriimaha iyo screen guriga app-ka buuxay. Waxa kale oo jira khaanad app ah in meel kasta oo aad ku soo bixi iyo rakibi telefoonka aad Android. Dhinaca kale, Windows Phones ayaa interface ah goolad shaashadda guriga ay customizable. macruufka ayaa fiirin isku tan iyo bilowgii, oo qoreysa qufulka iyo daaha guriga fikradda la mid ah waxaa lagu arki karaa Android. Waxa aanu lahayn feature app khaanad ah.
Faa'iidada ugu weyn ee in dhigeysa Android in hogaanka waa ay dabacsanaan design - OEMs hayaan lacag la'aan ah sida interface in uu eego sida. Taas macnaheedu waa in saaraha kasta uu fiirin kala duwan oo ay dareemaan iyaga; dhawaan lahayd inaad u xaddidan la Phones Windows iyo ma jiro haba yaraatee u iPhone boqornimadiisa.
• macloomaadkii Info
The feature Live marmarka on Windows Phones u ogolaanaya leben kasta in uu soo bandhigo macloomaadkii macluumaadka la heli karo ee app ee aan u baahan si aad u abuurtaan app. On Android, widgets yihiin muujinta u dhigma of Live dusiyeen. Iyadoo Android iyo Windows kaalinta awood u leeyahay bidhaamaysa waxa ku jira app ah shaashadda guriga, Apple danbeeyay inay tani tahay waqti dheeraad ah in fadhiyaa Xarunta Wargelinta ah.
• screen Home
Marka ay timaado in helitaanka badan ee screens guriga, dadban deg deg ah ka sare ee shaashadda ku sii dayn doonaa inaad aragto oo dhan ogeysiin ah in adiga oo aan siiyo fiiro gaar ah si ay u. Android iyo Windows Phones ayaa sidoo kale ku siin helaan si degdeg ah u dhowr goobaha lagu caweeyo this - on / aad noqon kartaa Bluetooth, WiFi, Mobile Data iwm off halkan. Apple ee macruufka ayaa habkaani ku kaydsan ee Xarunta Xakamaynta kaas oo aad ka heli karto by kabacdi ka soo xagga hoose ee shaashadda.
Inkastoo looks waa muhiim, baxsadeen oo ay heshiis dhab ah been u dhexeeya saddex dukaamada app iyo helitaanka barnaamijyadooda wanaagsan. Mid kasta oo ka mid ah nidaamka ka hawlgala ayaa ay dukaamanka u gaar ah; Android uu leeyahay Google Play, macruufka ayaa App Store ah, iyo Windows ayaa Windows dukaanka.
• Helitaanka App
In la eego helitaanka barnaamijyadooda weyn marka la eego shaqeynta iyo design, labada macruufka Android oo ay xukumaan. Apps labada OS si joogto ah casriyeeyaa qaababka cusub oo la rajeenayo in cayayaanka, gaar ahaan haddii app uu ka yimaado sameeysa weyn. In meel this, barnaamijyadooda Window Phones Hadhi ka dambeeya ay facooda Android iyo macruufka - waxa ay u muuqataa sida sameeysa sidaas ma aha isha si ay u sii sida updated. Si kastaba ha ahaatee, tani waxaa laga yaabaa in la olole caalami ah oo Windows 10 Mobile bedesho sida ka dhigi doonaa gudoodnsiiyay barnaamijyadooda u dhexeeya Android iyo macruufka in Windows Phone fudud.
Dad badan oo Android OEMs rakibi barnaamijyadooda iyaga u gaar ah, laakiin Google ee Suite ee Chine xudunta u yihiin si cabsi badan Android isticmaala inta badan kaliya u isticmaalaan sida Chine default ay. Chine Google si fiican u la dhexgeliyey midba midka kale, lagu kalsoonaan karo oo ay leeyihiin UIs wanaagsan. macruufka 'barnaamijyadooda default waa weyn haddii aad ku nooshahay caalamka Apple oo waa weyn yahay, maxaa yeelay duwan telefoonada Android, dadka isticmaala iPhone ma awoodaan inay dhigay barnaamijyadooda default iyaga u gaar ah. Iyadoo Windows, casriyayn ee OS socda rajo inuu ciyaaro barnaamijyadooda default fiican sababta oo ah kuwa hadda jira waa super wareer.
Android uu leeyahay sumcad in ay si nugul inay furin ka badan OS kale ee suuqa; taasi waa sababta oo ah Android waa il OS furan. Sidaa darteed, waxaa si sahlan loogu talagalay horumarinta xaasidnimo ah in Cudarada furin in waxyaabaha bixi karo. Sidaa darteed, dadka isticmaala waa in mar walba ka fogaadaan dajinta iyo barnaamijyadooda ku rakibidda ilo untrusted iyo dheggan yihiin kuwa la heli karo ee Google Play. Marka la barbar dhigo kulankii Android, macruufka wax badan aamin ah, maxaa yeelay, waxay u baahan tahay app sireed inay u badan is haysta oo sidaas daraaddeed fudud in la ilaaliyo. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah halka ay caan, macruufka u furan yahay weerarro dheeraad ah - a weerar digital tiro ahaan lahayd wax ku ool ah. Sida laga soo xigtay Eugene Kaspersky, Windows Phones harsan OS aad uga wanaagsan marka la eego ammaanka. Daah-socda ee Windows 10 Mobile ayaa la filayaa inuu ciyaaro badan oo amaan OS
Google Hadda vs. Siri vs. Cortana
Kalkaaliyeyaal shakhsi Digital loogu talagalay OS kasta oo u arkay oo horumar badan oo ka badan laba ka mid ah sano. Haddii aad rabto in aad ku xigeen cod-firfircoonaan ah digital shakhsi, Andoird ee Google Hadda waa ugu fiican saddex ka mid yahay mid ka mid ah. Waxaa dhakhso badan oo ka bixin doonaa jawaab badan oo sax ah su'aasha la weydiiyay. Waxa kale oo ay u badan tahay in la akhriyo jawaabta kuu baxo. Siri on macruufka ku yimaado dhow labaad haysataan; waxay siinaysaa jawaabaha saxda ah oo ay u badan tahay in la akhriyo jawaabaha soo bandhigay, inkastoo hab xasilan badan Google Hadda. Inta u dhaxaysa saddex kaaliyayaasha shakhsi digital, Cortana for Windows Phones ku yimaado ee la soo dhaafay ku dhow - waxa aan akhrin doonaa jawaabaha ka soo baxay cod weyn, laakiin halkii ay ka furi internet browser khuseeya.
Google Hadda sida muuqata waa dhagaysato si wanaagsan saddex ka mid ah. Iyada oo Siri iyo Cortana, dadka isticmaala waxay u baahan doonaan in ka badan-enunciate su'aalaha si ay u heli lahaayeen dhexdiisa xaq. Siri sidoo kale waxa uu u caado ah wax aad looga xumaado ah laftiisa xiro marka telefoonka la geeyo seexan. Google Hadda iyo Cortana weli lahaa ay screen la su'aashii hore iyo jawaabaha la heli karo. Faa'iidada ugu weyn ee Siri iyo Cortana ka badan Google Hadda waa awoodda ay u leeyihiin in aan ka jawaabno doqon ah si loo xafido marti qaaday.
Sida aad arki karto, nidaam kasta oo ka hawlgala ayaa qaababka ay togan iyo kuwa taban u gaar ah. Guud ahaan, Google Hadda waxay u muuqataa in ay ka mid saddex OS ugu fiican ee. Si kastaba ha ahaatee, dambaysta ah ee doorashada waa in mar walba ah mid shakhsi ah - waa in lagu saleeyaa waxa aad u baahan tahay oo aad rabto ka casriga ah. Waxaan rajaynaynaa in qodobkan ayaa kuu fududayn in qaadaaya aad telefoon soo socda.
Ka Windows Phone Demi Data si iPhone P
> Resource > Windows > Windows Phone Vs Android vs macruufka, oo OS mobile ugu fiican